I-Welwyn Studio - intuthuzelo ebanzi phantsi kwemithi
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguDavid
Indawo yokuhlala yabucala, enomtsalane kunye nokuphumla kwindawo ezolileyo yegadi ebekwe entliziyweni yeBowral yakudala. Thatha uhambo olufutshane ukuya eBradman oval ukuze ubukele umdlalo weqakamba. Emva koko uhambe uye edolophini ujonge iikhefi kunye neevenkile. Le ndlu yesitudiyo ibonelelwa ngayo yonke into oyifunayo kubandakanya i-wifi ekhawulezayo, iTV kunye nebluetooth sound system. Indawo efanelekileyo yokubuyela ababhali kunye neendawo zokupaka ezitratweni kunye netafile enkulu yekhitshi yelizwe. Igumbi lokuhlambela eliphangaleleyo kunye nekhitshi elicocekileyo ligqibezela intuthuzelo yakho.
Nceda uqaphele ukuba akukho TV yasimahla yosasazwa. Kukho iNetflix, iYoutube kunye ne-ABC Iview.
Old Bowral, ujikeleze ikona ukusuka eBradman oval kunye neSibhedlele saseBowral. Lo mmandla unemithi emininzi enamagqabi avuthulukayo kwaye ukhangeleka uzukile ekwindla naseNtwasahlobo xa iiplum ezininzi kunye nemithi yecherry idubula. Imizuzu emi-5 ukuya eSibhedlele okanye kwimyuziyam yaseBradman, yimizuzu eli-10 ukuya kweli-15 ukuya kumbindi wedolophu kunye nesitrato esiphakamileyo esinazo zonke iivenkile, iivenkile zokutyela kunye neekhefi.
I-Bowral ingaphakathi kwemizuzu engama-30 ngemoto yendawo entle enje ngeFitzroy Falls, edlula kwilizwe elibukekayo kunye neelali. Ukuqhuba ngokulula ukusuka apho ezantsi phambi kwethafa ukuya eKangaroo Valley ngobuhle bayo obumangalisayo. Kwelinye icala yiBurrawang neRobertson. Ukusuka apho ukuya eKiama kunye neentlanzi kunye neetshiphusi kumahlathi ashinyeneyo.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-5513-2